Brax: Gadzira, Gadzirisa, Uye Skerera Yenyu Yekushambadza Kubva Kurimwe Dashboard | Martech Zone
Brax: Gadzira, Gadzirisa, uye Shamba Yenyu Yekushambadza Kubva kuDashboard Imwe.
Muvhuro, Kukadzi 7, 2022 Muvhuro, Kukadzi 7, 2022 Douglas Karr
Zvakawanda zvekuoma kwekushanda neNative Advertising network kuoma kwekushanda pane ese ad network uye maturusi avo kuyera, kuenzanisa, kugadzira, kukwirisa, uye kuyera kushambadzira kwako.
Brax: Tonga Native Ads Zvese Munzvimbo Imwe
Brax ipuratifomu yekushambadza yekwakawanda manejimendi, yakabatana kushuma, uye mutemo-wakavakirwa chinangwa optimization pane ese masosi. Brax inokwenenzvera kubatanidzwa kwemukati muYahoo Gemini, Outbrain, Taboola, Revcontent, Content.ad, nevamwe. NeBrax, unokwanisa kuyera mashandiro emushandirapamwe nekuita kwagara kuripo, shanduko, uye data rekutengesa kuti uite bhajeti, kubhidha, uye kugadzirisa muparidzi. Iwe unogona kubatanidza maakaundi akawanda kubata akawanda mabhureki uchiwedzera vashandisi vakawanda vane mvumo yekuwana.
Brax inogonesa iwe ku:
Imwe Dashboard, Maakaundi Ako Ese - Batanidza akawanda maakaundi kuti utore akawanda emhando, mishandirapamwe, uye chiteshi, kusanganisira Outbrain, Taboola, Yahoo, Revcontent, uye Content.ad. Wobva waenzanisa kuita mumachaneli.
Bulk-Gadzirisa Budget, Mabhidhi, & Zvimwe - Gadziridza ESE emishandirapamwe yako kamwechete. Brax's Native Power Mharidzo inokutendera iwe kuti uchinje chero chikamu chemishandirapamwe yako (mune yakajairika spreadsheet-maitiro edhita) kuti utange nekukurumidza uye optimization.
Optimize otomatiki Kubva pane Performance -Seta mashoma akareruka mitemo, uye Brax inokwidziridza yako ad kuita kwako. Iwe unogona kugadzirisa kutenderedza chero KPI, kubva "nguva iri pasaiti" kuenda ku "mutengo pachiito chimwe" - zvichireva kuti zvakafa-zviri nyore kumbomira kushambadza nekuita kwakaderera, mubairo wekuiswa kwakanaka, kusabvisa kwakashata kuisirwa, nezvimwe zvakawanda.
Edza Kugadzira Mhiri Kwemishandirapamwe uye Networks -A/B bvunzo yekugadzira misiyano kune yega yega yemukati mishandirapamwe uye network.
Ita Sarudzo Kubva pane Trackable, Trustworthy Data - Taura zvakanaka kune data rakasviba kubva mukukanganisa kwevanhu, uye yakaraswa midhiya inoshandiswa zvichienderana nefungidziro dzisiridzo. NeBrax, iwe unotsanangura tag yako yekutevera kamwe chete kune chaiyo, inowirirana data zvachose. Shandisa macros kuisa zvine simba zita remushandirapamwe, ad ID, uye ID yemushambadzi.
Manage Team Access uye Mvumo -Simba maneja vashandisi vakawanda uye mazinga emvumo. Bvumira kuwanikwa nebasa, sangano, kana mushandirapamwe. Wona chiitiko nemushandisi kuti uone kuti ndiani akaita nguvai, uye bvisa kupinda pasina kuchinja mapassword.
Edza Chokwadi ROAS yeNzvimbo Yenyu Yekushambadza -Brax inokupa iwe kunzwisisa kuri nani kwemaitiro emunharaunda sese anoitira kambani yako. Ngenisa uye batanidza data kubva kune ako aripo masisitimu, anosanganisira Google Analytics - uye ona maitiro pamakampani ese, zvirimo, uye vatsikisi chero nguva yaunoda.
Tanga Yako Yemazuva-14 Yemahara Brax Muedzo
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Brax uye ndiri kushandisa yavo yehukama link mune ino chinyorwa.
Tags: ab testad taggingadtechbraxcontent.adkushambadzira kwazvinonative advertising dashboardnative advertising platformnative advertising roioutbraindzoka pane kushambadzira shandisaRevcontenttabhooYahoo Gemini